Ministry of Immigration and Population » ကြေငြာ​ချက်​များ
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့်ခရီးသည်များအတွက် ပြည်ဝင်စည်းကမ်းချက်များ (၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်) ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မေလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ထိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်မည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် အောက်ပါ ပြည်ဝင်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းထုတ်ပြန်ချက်အသစ်များအား လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်– လေကြောင်းခရီး ကွာရန်တင်း ဝင်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ၁။ ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးအပြည့်အဝထိုးထားပြီးသော ခရီးသည်များသည် Thai Pass အတွက် စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ အထောက်အထားများ တင်ပြရပါမည်– ၁.၁ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၁.၂ ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးကြောင်းလက်မှတ် ၁.၃ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဆေးကုသမှုအတွက် အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁သောင်း နှင့်ညီမျှသော ဆေးကုသမှုအာမခံလက်မှတ် (ထိုင်းနိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ) ၁.၄ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ (လိုအပ်ပါက) ၂။ ကိုဗစ်–၁၉ ရောဂါကာကွယ်ဆေးလုံးဝမထိုးထားရသေးသူများ… Read More >>
e-Visa Processing Fees No. Visa Type Fees Duration Online/Embassy 1 Tourist Visa (Online) US$ 50.00 28 days Online2Tourist Visa Express (Online) US$ 56.00 28 days Online3Business Visa (Online) US$ 70.00 70 days Online… Read More >>
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဗီဇာဖြေလျှော့မည့်ကိစ္စ ဖော်ပြခြင်း
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ဗီဇာဖြေလျှော့မည့်ကိစ္စ ဖော်ပြခြင်း ၁။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ဝင်/ထွက်ခွင့်ဗီဇာများ၊ ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် နိုင်ငံ ၁၃ နိုင်ငံအတွက် Unilateral visa exemption ပြန်လည်စတင်တော့ မည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာသံရုံး၊ ဟနွိင်းမြို့မှ အောက်ပါအတိုင်း အကြောင်းကြား ပေးပို့လာ ပါသည်။ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် သဘောတူညီထားသည့် နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံသားများအတွက် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများကိုလည်း ပြန်လည်စတင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် (၈၇) နိုင်ငံ၏ စာရင်းအား lanhsuvietnam.gov.vm တွင် အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်း၊ ထိုအတူ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံအတွင်းသို ဝင်ရောက်သည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်ကြာ ရောက်ရှိ နေထိုင်လျက်ရှိသည့် ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊… Read More >>
Online e-Visa လျှောက်ထားမှုများအား ပြန်လည်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်
Online e-Visa လျှောက်ထားမှုများအား ပြန်လည်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက် ၁။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနသည် Online e-Visa လျှောက်ထားရယူမှုများ အား ၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစတင်၍လွှင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ကမ္ဘာ တစ်ဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါပြန့်ပွားမှုနှုန်းမြင့်မားလာသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက် သည့် ခရီးသွားများအပေါ် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆောင်ရွက်သည့် ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ (၂၀-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (GMT +6:30)၊ (၂၃:၅၉) အချိန်မှစတင်၍ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ပါသည်။ ၂။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျှော့နည်းကျဆင်းလာသည့် အပြင် နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ဌာန၏ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ… Read More >>
Announcement of Online e-Visa Reopening The Ministry of Immigration and Population launched the e-Visa Website (evisa.moip.gov.mm) on 1st September 2014. In light of the evolving COVID-19 situation and rapid increase of COVID-19 cases around the globe, there has beenatemporary suspension for all new e-Visa applications since 20th March… Read More >>
နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် YGN သင်္ကေတဖြင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၏ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှစ်စဉ်သက်တမ်း အတည်ပြုလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း
နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် YGN သင်္ကေတဖြင့် ကိုင်ဆောင်ထားသူ နိုင်ငံခြားသားများ၏ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် နှစ်စဉ်သက်တမ်း အတည်ပြုလဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း – မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ ပြည်ဝင်ဗီဇာ တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ရက်ပေါင်း (၉၀) ထက် ကျော်လွန်နေထိုင်သူများသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၆(၁)(ခ)(ဂ) တို့အရ YGN သင်္ကေတဖြင့် နိုင်ငံခြားသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ရပါသည်။
– YGN သင်္ကေတ နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်သည် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ (၃၀) ရက်နေ့ တွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသားများ မှတ်ပုံတင်ရေး နည်းဥပဒေ အပိုဒ် ၇(၂)(ခ) အရ… Read More >>
ယာဉ်မောင်း-၅ ရုံးအကူ အစောင့်မှအမှုတွဲထိန်း အမှုတွဲထိန်း အစောင့်… Read More >>
လက်ထောက်လဝကမှူး အငယ်တန်းစာရေး ဒုလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်‌ဆောင်ရေးမှူး… Read More >>